ရေနံကိရိယာ၊ ဆီသတင်းစာစက်၊ ရေနံထုတ်ဝေသူ - Huipin
ချက်ပြုတ် / ဘွိုင်လာ
မြေပဲနှမ်းနှမ်းနေကြာဆီ Rapeseeds မြေပဲ Pu ...
HP က 120 မော်ဒယ်အေးရေနံစာနယ်ဇင်း
ဖောက်သည်များနှင့်အရည်အသွေးအမြဲတမ်းပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ အရောင်းနှင့်နည်းပညာအတွေ့အကြုံရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာအထူးပြုအကြီးစားဆန်စပါးနှင့်ရေနံစက်ကိရိယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
"Huipin" ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံ - ပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု!
Hebei Huipin Machinery Co. , Ltd. သည်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်စီမံကိန်းတပ်ဆင်ခြင်းတို့တွင်အထူးပြုသည့်အကြီးစားဆန်စပါးနှင့်ရေနံစက်ကိရိယာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်အောက်ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ Dingzhou Yongsheng Grain and Oil Machinery Co. , Ltd. နှင့် Wanli Grain and Oil Machinery Co. , Ltd. တို့ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်ကုမ္ပဏီသည်ပထမတန်းစားအမဲဆီပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းအခြေစိုက်စခန်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမဲဆီနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအပြင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်တိကျသောစက်ကိရိယာများရှိသည်။ အားလုံးအမဲဆီပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်ကြသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ Leaching အလုပ်ရုံ
20 တန် Rapeseed စာနယ်ဇင်းလိုင်း
120TPD နေကြာ Prepress လိုင်း
200TPD Rapeseed Prepress လိုင်း
500TPD Canola မျိုးစေ့ Prepress လိုင်း
မုန်ညင်းစေ့၏ ၇၀ တန်စာနယ်ဇင်းလိုင်း
ပြောင်းဖူးပိုးမွှား Pre-Press ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 100 တန်
ပြောင်းဖူးရောဂါပိုးစီမံကိန်း၏တန် ၂၀၀ ခန့်
500TPD Oilseed အရည်ပျော်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစျေးကွက်မှာဗဟိုအာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိကနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၀ ယ်သူအများက ၀ ယ်သည့်အခါ ၀ င်းဒိုး၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမည်မျှကြာကြာအစားထိုးမည်ကိုမေးလိမ့်မည်။ ဒီပြproblemနာကိုသုံးစွဲသူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကအရမ်းမြင့်နေပုံရတယ်။ ဒီနေ့ ...
ရေနံ 1. အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မလိုအပ်သည့်အဓိကအာဟာရသုံးမျိုး (ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတိန်းနှင့်ဆီ) တစ်ခုဖြစ်သည်။ စားသုံးမှုသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်း၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ T ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီရရှိရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝက်အူစာနယ်ဇင်းနည်းလမ်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းနည်းလမ်း၊ အရည်ပျော်ပစ္စည်းထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းစသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝက်အူနှိပ်ပါ ...
Hebei Huipin Machinery Co. , LTD
Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, ထုတ်ကုန်အားလုံး centrifuge Decanter, ရေနံစက်, ရေနံစာနယ်ဇင်းစက်၏ဝက်အူ Worms, နောက်ဆုံးပေါ်ရေနံရောင်းချသူ, အစားအစာဆီသန့်စင်စက်, သံလွင်ဆီသတင်းစာ,